Kutheni us-Yunis International Trading Co., Ltd.
Wamkelekile kwi YUNIS Trading
E-China iarhente yokuthenga ngumsebenzi wobugcisa. Ukuthenga into kubonakala kulula kakhulu, nangona kunjalo inyani ikude kakhulu kwimeko yesiqhelo. Umsebenzi wearhente yokuthenga eyiTshayina yahlukile kwivenkile enkulu.Iarhente yokuthenga iyafuneka ukufumana kanye oko umthengi anomdla kuko. umthengi unomdla kwi.
Ke, ukuba ungumthengi omtsha, uthenga izinto ngentengiso encinci kunye nomzuzu wokugqibela, uyakufuna iarhente yokuthenga enobuchule, eya kuthi ikwazi ukwanelisa iimfuno zakho kumaxabiso, ivolumu kunye nemigaqo.
Kutheni le nto ufuna inkonzo yeArhente yokuThenga eTshayina?
Kwelinye icala, uninzi lweefektri ezincinci zamaTshayina AMININZI kunye ne-MID azinayo ilayisensi ethe ngqo yokuThumela kwelinye ilizwe okwangoku kwaye umthengi akanakho ukuthenga ngokusemthethweni nangokuthe ngqo kubo. Ezo mveliso ziya kusebenzisa eyazo iArhente yokuthumela ngaphandle e China ukukhusela umdla wazo. Abathengi bacetyiswa ukuba basebenzise iarhente yabo yokuthumela ngaphandle okanye yokungenisa elizweni ukukhusela iimfuno zabo e-China kwiimeko ezinjalo. Kwelinye icala, umngeneleli ofanelekileyo wokungenisa okanye ukuthumela izinto kumazwe angaphandle uya kusebenza njengabancedisi bakho kunye namehlo, baya kukunceda ugcine ukufumana iifektri ezifanelekileyo, ulawule umngcipheko kwishishini, ulawule umgangatho kwaye unikezele nangeenkonzo emva kokuthengisa njl.njl e China, Ngale ndlela umthengi unokugcina ixesha elininzi kunye neendleko.
Sinokunikela okungenani ngokulandela umsebenzi okanye iinkonzo kubaxumi babo kwihlabathi liphela:
· Ukufunxa abathengisi abatsha okanye iifektri
· Uvavanyo lwabathengisi bakho.
· Uthethwano lwamaxabiso
· Ukuhambisa nokuthumela izinto
· Ukususwa ozenzele kona
· Ulawulo loLawulo loMgangatho
· Emva kokuthengisa inkonzo